Amenorrhea ရာသီထိန်ခြင်း၊ ရာသီမလာခြင်း Tue, Feb 7, 2012 at 11:54 AM
ကျွန်မ တားဆေးကို နှစ်နှစ်ခန့်သောက်ခဲ့ပြီးနောက် ဆေးကို ရပ်လိုက်ပါတယ်။ သောက်လက်စ ဆေးကဒ်အကုန် ရာသီလာအပြီးမှာ နောက်တစ်ကဒ်မသောက်တော့ဘဲ ရပ်လိုက်တာပါ။ အခု တစ်လနေတော့ ရာသီလာရမယ့်အချိန်မှာ မလာဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ ရက်ကျော်တာ (၇) ရက်ရှိပါပြီ။ Test နဲ့ စစ်ကြည့်တော့လည်း Negative ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ ဆေးခန်း သွားဖို့လိုမလား။ လမမှန်ရင် ကလေးရောရနိုင်ပါ့မလား သိချင်ပါတယ်။ Thu, Jun 5, 2012 at 06:12 PM
- ကျမညီမလေး၊ အသက် ၃ဝ၊ အပျို၊ ရာသီမလာတာကြာနေလို့ (့) ကို သွားကုတာ၊ တားဆေး သောက်ခိုင်းတယ်။ သောက်နေတုံးမှာ လာတယ်။ မသောက်တော့ မလာတော့ပြန်ဘူး။
- အရင်ဆုံး ဗိုက်နဲ့ တင်ပါးဆုံနေရာကို (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်ပါ။ စာတပုဒ်ရေးပါမယ်။ ညီမလေးဆီ ပို့လိုက်ပါ။
Amenorrhea ရာသီထိန်တာ ရာသီမလာတာ ရောဂါ မဟုတ်ပါ။ ရောဂါလက္ခဏာတခုသာ ဖြစ်တယ်။ ရာသီမလာစေတဲ့ အခြေခံ တခုခုရှိမယ်။ ရာသီမလာခြင်း (၂) မျိုးရှိတယ်။
၁။ Primary Amenorrhea မွေးကတည်းကမလာတာ နဲ့
၂။ Secondary amenorrhea အရင်ကလာဘူးပြီး နောက်မှာမလာတာ၊
၁။ Primary amenorrhea မွေးကတည်းက ရာသီတခါမှ မလာသေးခြင်း
မိန်းကလေးတယောက် အရွယ်ရောက်ချိန် ဖြစ်ပါရက်နဲ့ ၁၆ နှစ်သမီးလောက်အထိ ရာသီတခါမှ မလာတာကို ခေါ်တယ်။ Late puberty အပျိုဖြစ်နောက်ကျတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ လူကသိပ်ပိန်နေသူတွေ၊ အားကစား ပြင်းပြင်းထံထံ လုပ်သူတွေ၊ ငယ်ငယ်ကတည်းက (ဘဲလေး)၊ (မာရသွန်)၊ ဂျွမ်းဘားကစားတဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာ ရာသီလာတာ နောက်ကျတတ်တယ်။ အဲဒါတွေ မဟုတ်ရင် ရောဂါတခုခုကို စဉ်းစားရမယ်။
• Genital Abnormalities မွေးရာပါ မျိုးပွါးအင်္ဂါတွေ ချို့ယွင်းနေတာ၊ ဥပမာ သားအိမ် မပါတာ၊ ဗဂျိုင်းနား မပါတာ၊ Vaginal septum ဗဂျိုင်းနား အခန်း ၂ ကန့်ဖြစ်နေတာ နဲ့ Imperforate hymen အပျိုမှေး ပိတ်နေတာ။
• Hypothalamic Problems And Pituitary Disease ဦးနှောက်ထဲက (ပစ်ကျူထရီ) အကျိတ်ရောဂါ၊ (ဟိုက်ပိုသဲလ်မတ်စ်) ရောဂါ၊
• Ovulation Abnormality မျိုးဥထွက်စေမဲ့ (ခရိုမိုဇုမ်း) တွေက ပုံမှန်မဟုတ်တာ၊
• Obesity အဝလွန်တာ၊ Thyroid Disease လည်ပင်းကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ (Hypothyroidism ဟော်မုန်းနည်းတာ၊ Hyperthyroidism ဟော်မုန်းများတာ)။
• Turner’s syndrome လိင် (ခရိုမိုဇုမ်း) ရောဂါဖြစ်နေတာ၊ (ခေါင်းကိုက်၊ နို့ရည်ထွက်၊ လူက ပိုဝလာ၊ ဝက်ခြံပေါက်၊ လိင်စိတ်ပြောင်းလဲ၊ စကားသံ နိမ့်လာ၊ မျက်နှာမှာ အမွှေး ပိုပေါက်၊ မျက်စိကြည့်ရ မကောင်း ဖြစ်လာတာတွေရှိမယ်။)
၂။ Secondary Amenorrhea အရင်က လာပြီးနောက်မှ ရာသီမလာခြင်း
• Pregnancy ကိုယ်ဝန်ကို အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်။
• Premature Menopause သွေးဆုံးချိန်စောတာလဲ ထည့်တွက်ရမယ်။
• တချို့ သန္ဓေတားဆေး-တားနည်းတွေက ရပ်လိုက်ပေမဲ့ ၃-၆ လ အထိ ရာသီ ပြန်မလာတာ ဖြစ်တတ်တယ်။
• Busulfan, Chemotherapy, Chlorambucil, Cyclophosphamide, Phenothiazines ဆေးတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Lifestyle factors ဘဝလူနေမှုပုံစံကြောင့် ဖြစ်နိုင်တာတွေလဲ ရှိတယ်။ - စိတ်ဖိအားများတာ၊ စိတ်ဓါတ်ကျနေချိန်၊ လူက သိပ်ပိန်တာ၊ ကိုယ်လက် လှုတ်ရှားမှုလုပ်တာ သိပ်များသူ။ နာတာရှည် ရောဂါတခုခု ခံစားနေရချိန်၊ - ကလေးနို့တိုက်နေချိန်၊ အစာအာဟာရ ချို့တဲ့သူ၊
- အဆီ 15% - 17% body ထက်နည်းနေသူ၊ - ချက်ချင်းပိန်ကျသွားသူတွေမှာ ပိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။
1. Ovary မျိုးဥအိမ်ကြောင့် ၄ဝ%၊ Polycystic ovary syndrome (PCOS) မျိုးဥအိမ်မှာ အကျိတ်လေးတွေ ရှိနေတဲ့ရောဂါ၊ (လူဝမယ်၊ ကိုယ်မွှေးပိုပေါက်မယ်၊ ဝက်ခြံထွက်မယ်၊)။
2. Hypothalamus (ဟိုက်ပိုသဲလမတ်စ်) ကြောင့် ၃၅%၊
3. Pituitary (ပစ်ကျူထရီ) ကြောင့် ၁၉%၊ 4. Uterus သားအိမ်ကြောင့် ၅%၊ Uterine scarring (Asherman's syndrome) ကိုယ်ဝန်ပျက်-ဖျက်လို့ သားအိမ်ခြစ်ရာကနေ သားအိမ်ထဲ အမာရွတ်၊ 5. တခြားအကြောင်းတွေကြောင့် ၁%။
ဆေးစစ်တဲ့အခါ ရောဂါရာဇဝင်မေးတယ်၊ အထွေထွေစစ်ဆေးတာ၊ လိင်အင်္ဂါနေရာတွေ စစ်ဆေးတာ လုပ်တယ်။ • Pregnancy test ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိ စစ်သင့်တယ်။
• Blood tests သွေးထဲက ဟော်မုန်းအခြေအနေတွေကို စစ်မယ်။ Estradiol, Follicle stimulating hormone (FSH), Luteinizing hormone (LH), Prolactin, Testosterone နဲ့ Progesterone Challenge Test (Provera) စစ်နည်းနဲ့ (ပရိုဂျက်စတီရုမ်း) အခြေအနေကို စစ်မယ်။
• Thyroid function test လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်း အခြေအနေတွေကိုလဲ စစ်မယ်။ (TSH) များနေရင် Hypothyroidism ဟော်မုန်းနည်းရောဂါ ဖြစ်နေမယ်၊
• Ovary function test မျိုးဥအိမ်အလုပ် စစ်ဆေးခြင်း၊
• Pelvic ultrasound တင်ပါးဆုံနေရာကို (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်မယ်။ CT scan of the head, MRI of the head, Endometrial biopsy, Hysteroscopy နဲ့ Genetic testing တွေလဲစစ်မယ်။
Irregular Periods ရာသီလာမမှန်တာ အမျိုးသမီး ၃ဝ% လောက်မှာ ဖြစ်တယ်။ ရာသီမလာတာ၊ စောတာ၊ နောက်ကျတာ၊ များတာတွေ အားလုံးကို မမှန်စာရင်း သွင်းတယ်။ ရာသီမှန်ဘို့ရာ Estrogen နဲ့ Progesterone ဟော်မုန်းတွေ မှန်ရမယ်။ Hypothalamus (ဟိုက်ပိုသဲလ်မတ်စ်)၊ Pituitary gland (ပစ်ကျူထရီ-ဂလင်း) နဲ့ Ovaries မ-မျိုးဥအိမ်အင်္ဂါတွေ ကောင်းနေရမယ်။ ရေရှည်မှာ Complications နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ Infertility ကလေးမရနိုင်တာ နဲ့ Osteoporosis အရိုး အားနည်းတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဆေးကုနည်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဘာလို့ရာသီမလာသလဲ သိရင် ကုသပေးနိုင်တယ်။
ရောဂါအဆန်းအပြားတွေ ထည့်ရေးရပေမဲ့ အများဆုံးဖြစ်တာတွေကို ရွေးထုတ်ပါမယ်။
1. Pregnancy ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း၊
2. Stress စိတ်ဖိအား များခြင်း၊
3. Diet အစားအသောက် နည်းလွန်းခြင်း၊
4. Exercise ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း များလွန်းခြင်း၊
5. Menarche အပျိုဖြစ်စကာလ၊
6. Menopause သွေးဆုံးစောခြင်း နဲ့ 7. Hormonal Birth Control ဟော်မုန်းပါ တားဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
• လူနေမှု အကြောင်းခံတွေကို အရင်ပြင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိစစ်ပါ။ အစာအာဟာရ မျှတ လုံလောက်အောင် စားသုံးပါ။ ကိုယ်လက်လှုတ်ရှားမှု အတင့်တင့်အောင်သာ လုပ်ပါ။ စိတ်ဖိအားတွေ စနစ်တကျ လျှော့ချပါ။
• တကယ်လို့ Testosterone (တက်စတိုစတီရုန်း) ကျား-ဟော်မုန်း များနေသူဆိုရင် Hormonal supplements ဟော်မုန်း အစားထိုးကုသနည်း လုပ်ရမယ်။
• Polycystic Ovary Syndrome က အဖြစ်မနည်းလှဘူး။ စာတပုဒ်ရေးထားပါတယ်။
• Inflammatory Bowel Disease အစာလမ်းရောဂါတခုနဲ့လဲ ရာသီမမှန်တာက ဆက်စပ်နေတတ်တယ်။ လူက ပိန်လာတယ်၊ ဗိုက်နာမယ်၊ ဝမ်းပျက်မယ်။ • Hormonal Contraceptives ဟော်မုန်းပါ ကိုယ်ဝန်တားဆေးသုံးပါ။ Estrogen နဲ့ Progesterone ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲကို သုံးရမယ်။ အမေရိကားမှာ ၁့၅ သန်းသော အမျိုးသမီးတွေက တားဆေးကို ကိုယ်ဝန်တားဘို့ မဟုတ်တာအတွက် သုံးနေကြတယ်။ Menstrual pain ရာသီလာချိန် နာတာသက်သာဘို့၊ Acne ဝက်ခြံပေါက်တာ သက်သာဘို့၊ Menstrual regulation ရာသီလ-ရက် မှန်ဘို့အတွက် သုံးကြတာ ဖြစ်တယ်။ Hirsutism ဟော်မုန်းရောဂါ၊ Menstrual migraines ရာသီလာချိန်မှာ (မိုင်ဂရင်း) ဖြစ်တာ နဲ့ Fibroids သားအိမ်အကျိတ် ရောဂါတွေအတွက်လဲ ပေးတယ်။ ဆက်တွဲဖတ်နိုင်တာတွေ -
1. Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) ရာသီ မမှန်ရင် ဖတ်ပါ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/02/polycystic-ovarian-syndrome-pcos.html
2. Menstruation (1) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/04/menstruation.html
3. Menstruation (2) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2011/04/menstruation_25.html
4. Menopause (1) သွေဆုံး-သားဆုံး (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2010/12/menopause.html
5. Menopause (2) သွေဆုံး-သားဆုံး (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/menopause-2.html
6. Menopause (3) သွေဆုံး-သားဆုံး (၃) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/03/menopause-and-perimenopause.html
Epididymitis and Orchitis ကျား အစေ့-အကြေ...
ကျတော်နဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ သစ်သားရုပ်ထုလေး
Pretty Model Girls @ Yangon Business Exp...
Photos: Day of 360' World, Kanebo Cosmet...
နိုင်ဂျီးရီးယားသူဌေးတစ်ဦး မယားငါးယောက်၏ မုဒိန်းကျ...
လူကြီးရောဂါ စ - ဆုံး ပီဒီအက်ဖ် အောက်မှာဒေါင်းန...
Different Methods of Contraception ပ...
Q and A Over 18 Readings (58) ...
Iron Cross (IC) London Tour 2012 ဇူလိုင်လ (၁၄)...
Mr & Miss Taw Win Beauty Contest 2012, in Yangon ...
WEB DESIGN (U THAUNG WIN)
XXY Male ယောက်ျားလား၊ မိန်းမလား ...
Calendar method ပြက္ခဒိန်နည်း က...
ချက် ချက် ချက် ချက် သောက်ရမ်းချက် (1) ချက်...
ကြောင်ကြောင်ကြားကြားအောက်က ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ...
Contraceptive patch အရေပြား ကပ်ထားရတ...
Glaucoma မျက်စိ ရေတိမ် Mon, J...
] @nyaminthar nude
HIV Duo Test ဆိုတာဘာလဲ ပျော်ပါ...
Oligohydramnios ရေမြွှာရည်နည်းခြင်း ...
Hydramnios ရေမြွှာရည်များခြင်း ...
မြန်မာပြည်သို့ ခရီးသွားခြင်း တဲ့ ...
PMS (2) ရာသီမလာခင် ဖြစ်ချင်တာတွေ (၂) ရာသီမလာခင်...
HIV အတွက် Truvada ဆေး HIV ကူးစ...
Uterine prolapse သားအိမ်ကျတယ်ဆိုတာ ...
Sakura Cocomi – Pervert Young Wife Next Door
Model Thun Sett in Sexy Black Fashio...
miss korea video
Olay Anti-Aging Cosmetic မိတ်ဆက်ပွဲ
မိုးရာသီ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ နှင့် Promotion ပွဲတော်
Fashion Day - Fashion Show
The Biggest Hair Show 2012
ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ ရင်ခုန်စေတဲ့ အလှတရာများ ...
ရေချိုး ချောင်းရိုတ် လေးပါ
Double Reproductive Organs အင်္ဂါနှစ်မ...
"အသီးတရာမှ အညှာတစ်ခုသို့ တမ်းတခြင်း"
ခပ်ဟော့ဟော့ မျက်နှာသစ်မော်ဒယ်မလေး နန်းမိုမိုအောင်...
အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းနေတော့ ဘာလုပ်ရမှာလဲ
ကိုယ်တိုင်ရေးဇာတ်လမ်း N ကိုင်ရာ
Nipples ထိပ်ဖျားအရောင် တိမ်တောင်သဖွယ...
Model Aye Myat Thu in Red One-piece Swimwear ...
***လှ တာ လေး မှ စိန...
Polygamy and Health (2) မယား များမျာ...
(hCG) ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိစစ်တဲ့ ဟော်မုန...
Model Yadana Kyaw Oo: Cuttie @ Aband...
New Face Model Eaint Yadanar Cho in ...
Pretty New Face Model Girl, Su Myat ...
china funny sex video (1)
ရွှေစင် @myanmar beer
မိုးဖွဲဖွဲအောက်မှာ လှိုင်သဇင် နှင့် မရီနာ
Amenorrhea ရာသီထိန်ခြင်း၊ ရာသီမလာခြင်း Tue, F...
Cosmetic Surgery Before and After (ပလပ်စတစ်-ဆာဂျရီ...
happy birthday khun sint nay chi
True virgin အပျိုစစ်
Sperm swallowing သုက်ရည် မျိုချခြင်း
Aroma ရဲ့ Wedding Fashion 2012 ဖက်ရှင်ပွဲ
ဆိုတေး တဲ့ ဆို တေး ဆိုပြီး မေး...
Beauty medication အလှဗေဒ Date: ...